Weriye C/laahi Kulmiye oo shaaciyey inay soo weerareen ilaalada R/wasaare Rooble | Somsoon
Home WARAR Weriye C/laahi Kulmiye oo shaaciyey inay soo weerareen ilaalada R/wasaare Rooble
Weriye C/laahi Kulmiye oo shaaciyey inay soo weerareen ilaalada R/wasaare Rooble
Weriye Cabdullahi Kulmiye Cadow oo shantii maalmood ee u dambeysay NISA u xirnaa ayaa maanta markii lasii daayey kadib, waxa uu faahfaahin ka bixiyey qaabkii loo soo qabtay iyo cidda soo xirtay.
Weriyaha ayaa sheegay in xilli saqdhexe ah ay guriga ku soo jebiyeen rag dhar cad ah oo bastoolado ku buheysnaa, kana tirsan NISA iyo kuwo milateri ah oo ka socday xafiiska raiisul wasaaraha cusub Maxamed Xuseen Rooble.
“Arrinta ugu daran waxay tahay in xilli saqdhexe ah guriga la igu soo jebshay, kadibna ay gudaha ii soo galeen rag hubeysan oo bastoolado ku hubeysan iyo kuwo milateri ah oo ka socday xafiiska ra’iisil wasaare Rooble” ayuu yiri Weriye Cabdullahi Kulmiye.
Waxa uu sheegay inta aysan guriga jebin inay soo gargaraaceen, markii uu la hadlayna ay u sheegeen in banaanka ay ku sugayaan weriyeyaal kale, balse uu ka diiday.
“Mar kale ayey igu yiraahdeen baaritaan guud ayaa socda ee albaabka fur, waxaan ku iri waa xilli dhexe, wixii baaritaan ah subixii hanoo ahaadeen, gurigeyguna waxa uu ku yaalla meel aan ka fogeyn madaxtooyada, kadib guriga waa soo jebiyeen, markii aan arkay inay hubeysanyihiin, waan raacay anigoo diidaaya in buuq dhaco, maadaama caruur iyo hooyo ay jiifeen, xilli dhexana ay aheyd” ayuu hadalkiisa ku sii daray.
Arrinta la yaabka leh ayaa ah in ciidamada xilligaas guriga ku jebiyey Weriyaha ay ka mid ahaayeen ilaalada ra’iisul wasaaraha cusub ee dalka Maxamed Xuseen Rooble, sida uu sheegay Cabdullahi Kulmiye.
Sida muuqata Ra’iisul wasaare Rooble ayaa cagta saaray wadadii ra’iisul wasaarayaashii ka horeeyey qaarkood, kuwaas oo ciidamada ka tirsan xafiiskooda ay dadka dhibaateyn jireen.
Magacaabistiisii kadib, Rooble ayaa lagu hanweynaa in siyaasadda dalka uu si degan u maareeyo xilligan kala guurka ah, oo kamid ah marxaladaha ugu adag ee dalka soo wajaha, afartii sanaba mar.
Hadii ciidamo ka tirsan ilaalada xafiiska ra’iisul wasaare Rooble ay xilligaas sifo aan sharci aheyn Weriyaha ugala baxeen hoygiisa, taasi waxay cabsi ku abuureysaa siyaasiyiinta iyo shakhsiyaadka kale ee xukuumadda Rooble ka aragtida duwan, kuwaas oo ay macquul tahay in loo awood sheegto, iyadoo laga faa’iideysanayo waqtigan kala guur ah ee dalku galay.
Article horeMadaxweyne Trump iyo musharax Joe Biden oo yeelanaya doodii u dambeysay
Article socoda Xog: Maxuu ku soo dhamaaday kulankii ay Nairobi ku yeesheen Kheyre iyo Sheekh Shiriif?